Vaparidzi Vari Kurega Adtech Kuuraya Izvo Zvavo Zvakanakira | Martech Zone
Iyo dandemutande ndiyo inesimba uye inyanzvi yekuumba kuti ivepo. Saka kana zvasvika pakushambadzira kwedhijitari, zvekugadzira zvinofanirwa kunge zvisina muganho. Muparidzi anofanira, mune dzidziso, kugona kusiyanisa zvakanyanya kit yayo midhiya kubva kune vamwe vaparidzi kuti vakunde kutengesa kwakasununguka uye kuendesa zvisingaenzaniswi maitiro uye mashandiro kune vamwe vavo. Asi ivo havadaro - nekuti ivo vakatarisisa pane izvo ad tech inoti vaparidzi vanofanira kuita, uye kwete izvo zvavanogona kuita chaizvo.
Funga nezve chimwe chinhu chakareruka sekushambadza kwemagazini yakajeka. Iwe unotora sei simba reiyo izere-peji, inopenya yemagazini kushambadza uye unounza iwo iwo akafanana chiitiko kuratidza kushambadzira? Pamwe panenge pasina nzira dzakawanda dzekuita izvozvo mukati meyakaganhurirwa IAB standard ad mauniti, semuyenzaniso.
Ad tech yakashandura kushambadzira kutenga nekutengesa mumakore gumi apfuura. Zvirongwa zvemapuratifomu zvakaita kuti kushambadzira kwedigital pachiyero kuve nyore kupfuura nakare kose. Izvo zvine ayo akakwirisa, kunyanya kune vamiririri uye ad tech yepazasi mutsara. Asi mukuita izvi, yakacheka kwakawanda kugona uye kukanganisa kwakaitwa nemishambadziro yekushambadzira. Iwe unogona chete kukodzera simba rakakura kudaro rekumaka mune yepakati rectangle kana bhodhi remberi.
Kuti ubudise macampaign edhijitari pachiyero, tech tech inotsamira pazvinhu zviviri zvakakosha: kuomesa uye kuita zvigadzirwa. Ose ari maviri ari kukanganisa kushanda uye kugona kwekushambadzira kwedhijitari. Nekumanikidza yakasimba zviyero pamasikisi ekugadzira uye zvimwe zvakakosha zvinhu, ad tech inofambisa mishandirapamwe yedhijitari pawebhu yakavhurika. Izvi zvinofanirwa kuunza kugadziriswa kweyekutsvaga hesera. Kubva pakuona kwechiratidzo, zvese zvigadzirwa zvakaenzana kana zvishoma, kuwedzera kupa uye kutyaira muparidzi mari inowanikwa pasi.
Iyo yakadzika chipingamupinyi yekupinda yedhijitari yekutsikisa nzvimbo yakatungamira kuputika kwenzvimbo yedhijitari, zvichiita kuti zvinyanye kuomera kuti mabrandisi kusiyanisa pakati pevaparidzi. Yemunharaunda enhau saiti, B2B saiti, niche masaiti, uye kunyange mablog ari kukwikwidzana nemakambani makuru enhau yekushambadzira madhora. Mari yekushambadzira yakapararira yakatetepa, kunyanya mushure mekunge varidzi vepakati vatora kuruma kwavo, zviri kuita kuti zvive nyore kune vaparidzi uye vaparidzi vadiki kuti vararame - kunyangwe pavangave vari nani, vanonangidzirwa kukodzera kweiyo yakapihwa brand.
Panguva yekufora mukiyi-nhanho netekinoroji yekushambadzira, vaparidzi vakasiya mukana wakakura wavakave nawo mukurwira mari yemashambadziro: Kuzvitonga kuzere pamusoro pemawebhusaiti avo uye midhiya kits. Vazhinji vaparidzi havagone kutaura vakatendeseka kuti pane chero chinhu nezve bhizinesi ravo, kunze kwehukuru hwevateereri vavo uye zvemukati zvinotarisa, izvo zvinozvisiyanisa.
Kusiyanisa kwakakosha kune chero bhizinesi 'kukwikwidza kubudirira; pasina iyo, mikana yekurarama haina tariro. Izvi zvinosiya zvinhu zvitatu zvakakosha kune vese vaparidzi nevashambadzi kuti vafunge.
Pachave Nechinogara Chiri Chakakomba Kuda Kwekunanga Kutengesa - Kana mhando dzichida kuendesa yakakwira mishandirapamwe pamhepo, ivo vanofanirwa kushanda vakananga nemuparidzi. Muparidzi wega ane simba rekufambisa mishandirapamwe isingagone kutengeswa pawebhu yakavhurika. Saiti makanda, pushdowns, uye yakarongedzwa zvemukati ndidzo dzimwe dzedzidziso dzehusimbe izvo zviri kuitika parizvino, asi kuwanikwa kwesarudzo kuchawedzera mumakore anotevera.
Vaparidzi veSavvy Vachawana Nzira dzeKuwedzera Zvipo Zvekugadzira - Vaparidzi vakangwara havamiriri zvigadzirwa kuti vadzike mazano ezvemhando yepamusoro mushandirapamwe. Ivo vanoshingairira kufunga mazano matsva, uye ivo vanotsvaga nzira dzekuvashandisa mune yavo midhiya kits uye pitches. Mutengo wekuurayiwa kwemushandirapamwe uyu uchauya pasina mubhadharo, asi kuwedzera kuma ROI epamusoro, mutengo wemishandirapamwe wakadai uchazodzikiswa. Kwese kupi paine mukana wekudzikisa mutengo mumusika, anokanganisa mushandi webasa anozopedzisira apindira.
Vaparidzi nevatengesi Vachawana Nzira dzeKununura Yakakwira Impact Campaign Pamitengo Yakaderera - Haasi muparidzi wese kana mucherechedzo ane bhajeti rekugadzira tsika dzekuratidzira. Kana dzikadaro, panogona kunge paine zvisingatarisirwe zvakakwirira dhizaini uye kusimudzira mutengo. Nekufamba kwenguva, vechitatu makambani ekugadzira anowana nzira dzekudzora matambudziko iwayo nekugadzira pasherufu masarudzo ekugadzira ayo vatengesi nevashambadzi vanogona kutenga nekushandisa kuendesa mhando yemabatiro uye mashandiro avanowana nguva yakaoma kuwana neimwe nzira.
Kuzvipira Kuzvimiririra Kukotamira KuAdtech Ndicho Kurasikirwa Chirevo
Yakakwira yekudzvanya mitengo, ROI, uye brand kukanganisa zvese zvakakanganiswa zvisirizvo neyakagadziriswa uye kugadzirwa kunodiwa kuti kushambadza kushande pachiyero. Izvo zvinosiya yakavhura mikana mitsva kune vaparidzi nevashambadziri kuti vatorezve kugona pamwe nekubudirira kwaimbove kwavo.
Vatsigiri ve tech ad pasina mubvunzo vanopokana kuti programmatic kushambadzira zvese hazvidzivirirwe uye chinhu chinoshamisa kune vaparidzi nevashambadzi zvakafanana nekuti zvinodzikisa mutengo wekutengesa uye zvinopa vaparidzi vakawanda chimedu chepayi. Maitiro anongori ehunyanzvi anodikanwa kuti riite iro basa.
Zviri kusahadzika kuti vaparidzi (ivo vachiri vakamira zvakadaro), vanobvuma nemoyo wese. Kubudirira kwaAdtech kwave kuri kunyanya kutsikisa nhamo. Asi zviri kune vaparidzi vamwe chete kuti vatsvage nzira dzekurwisa nekufunga zvakare maitiro avo kushambadziro yekutengesa.
Tags: mishandirapamwe yekushambadzirashambadza shandisaad zvikamuadtechvashambadzikutengesa teknolojiaIABprogrammatic kushambadzirasaizi yekushambadzirayakajairwa kuratidza kushambadzira saizi
Kenny Katzgrau ndiye CEO we Broadstreet Ads uye munyori we Gumi Kubatsira: Magazini uye Hyperlocal Nhau Vaparidzi Vachakunda Sei muNguva yeGoogle neFacebook.